Inhlalo emzini waseDube akusiyo enempilo nephephile - Bayede News
Home » Inhlalo emzini waseDube akusiyo enempilo nephephile
Ngowezi-2010 uMnyango Wokuhlaliswa Kwabantu eGauteng waba nohlelo lokulungiswa kwehositela iDube eSoweto, eGoli, elalinezakhiwi ezinamakamelo amabili emva kokuba zidiliziwe ngenhloso yokuzilungisa kwasuswa abahlali abangama-300 bahlaliswa eziqukathini ezakhelwe ukugcina impahla.
Kodwa emva kweminyaka elishumi lezi zakhamuzi zisahleli kuzo lezi ziqukathi okwakufanele kube yindawo yokuquba okwesikhashana.
Omunye wabahlali bakuleli hositela uNks uLindiwe Malinga uthe: “Basishiye dengwane kula makhontena okwakumele kube indawo yesikhashana ngowezi-2010 namanje ngowezi-2020 sisalinde izindlu zethu.”
La makhontena abekwe ngobunono aphinde axubane nemijondolo kanti ayikhaya kubantu abangama-300 izindlu zabo ezadilizwa babekwa ngaphesheya komgwaqo. Kumanje bayazibuka izindlu okufanele kube ngezabo kodwa abangakabelwa zona. UNks uMalinga uthi minyaka yonke kuba nezethembiso.
“Ngangithokozile ukubona inkampani eyakhayo ngowezi-2010, ngethemba ukuthi sengizoba nophahla olusesimweni kodwa nakhu ngilana futhi ngiyaguga ngisalinde indlu,” kusho uNks uMalinga.
Izindlu ezintsha sezize zacekelwa phansi kwebiwa nempahla. “Alusekho uphahla, izintambo, amawindi, ompompi kanye neminyango kulezi zakhiwo ezintsha. Angiqondi ukuthi kungani basiletha ngapha bawisa izindlu zethu,” kusho insizwa endala uSikhakhane nayo esalinde ukunikwa indlu yayo.
Lezi ziqukathi abagcinwe kuzona ziwumhubhe kanti ukuze zihlonipheke bahenqe ngezindwangu ukuhlukanisa indawo yokulala, eyokuphumula, eyokugeza neyokupheka.
UNks uMalinga uthe izakhamuzi sezisebenzisa ihlathi uma zidinga ukuzikhulula ngoba azinazo ezihlanzekile ezikhona sezinephunga elixakile.
“Emasontweni amabili edlule basithumelele izindlu zangasese ezintsha kepha nazo seziyanuka ngenxa yomthamo omkhulu wabantu abazisebenzisayo,” usho kanje.
Uqhube wathi unina wadlula emhlabeni esalinde indlu. Uphinde waveza ukuthi izakhamuzi sezihlala ngokwesaba ngoba le ndawo inobugebengu.
Okhulumela ihhovisi likaMphathiswa woMnyango Wokuhlaliswa Kwabantu eGauteng, uMnu uCastro Ngobese, uthe kwakwakhiwa lezi zindlu ngoba bewuMnyango behlose ukwelekelela izakhamuzi ukuba zihlale endaweni ezizokwazi ukuqasha kuyona ngamanani aphansi. Uthe izindlu ezingaphezu kwama-400 zakhiwa ehositela iDube kodwa abantu benqaba ukhokha irenti.
Echaza ngokudilizwa kwalezi zindlu, uthe iNational Home Builders Registration Council (NHBRC) yathatha isinqumo sokuthi izakhiwo zidilizwe zakhiwe kabusha. “UMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu usazibophezele ekuguquleni impilo yabantu basehositela eDube abahlala kumakhontena kanye nabo bonke abahlala emahositela esifundazweni iGauteng,” kusho uNgobese.